सास फेर्न योग्य छैन काठमाडौं उपत्यकाको हावा, प्रदूषणको दर खतरानाक अवस्थामा – NepalajaMedia
सोमबारको वायुप्रदूषण वर्षकै उच्चप्रदूषण भएको वातावरण विभागको तथ्याङकले देखाएको छ । सामान्य जीवनयापनमा पीएम २.५ माइक्रोनको धुलो विश्व स्वास्थ्य संगठनले २५ र सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूव तोकेको छ । ४ सय भन्दा माथि काटे सरकारले कुनै पनि समधानका उपाय अपनाउन सकेको छैन । विकसीत देशहरुमा भने संकटकालनै लागु गरेर सर्तकता अपनाउने गरेको पाइन्छ । यो अवस्थालाई हेर्दा उपत्यकाको वायू २४ सै घण्टा स्वास फेर्न लायन नभएको वातवरणविद र स्वास्थयकर्मीहरु बताउँछन् ।
उसै त काठमाडौं उपत्यकामा वायू प्रदूषणको दर बढ्दो अवस्थामा छ तर पछिल्लो साता बढेको चिसोले झन प्रदूषण बढाएको भन्दै सचेत हुनु जरुरी भएको छ । सरकारी मापदण्ड भन्दा वायूको प्रदूषणदर पाँच गुणासम्म बढी पुगेकाले ज्यानमारा वायूमा उपत्यकाबासी स्वासप्रश्वास गर्न बाध्य छन् ।
१. मर्निङ वाक नगर्नु गरे पनि सडक भन्दा टाडा खुल्लास्थान गर्नु
२. माक्स लगाएर हिड्नु
३. विहान ९ बजे भन्दा अगाडी चलहपहल हुने क्षेत्रमा ननिस्कनु
४. फोहर जलाउन नदिनु
५. धुलो सरसफाइमा आफैले पनि सहयोग गर्नु
६. सकेसम्म जोगिएर बस्नु
७. प्रदूषित गाडी सञ्चालन नगर्न र नगराउन
Prevदाहाल र नेपाल पक्षको जवाफ : ‘निर्वाचन आयोगको पत्र असान्दर्भिक’
Nextदक्षिण कोरियाले बिमानभन्दा छिटो कुद्ने रेल बनायो
सुब्बामा जागिर खुल्यो, खुल्लाबाट ४११ र बढुवाबाट ४३२ जना पदपूर्ति हुने: